Integrating Engineyard's Deploy Hooks with Slack
At Rebbiz, we have just recently adopted Slack as an alternative form of communication. For that, I was thinking of integrating our platform and slack together so that everyone in the team should receiveamessage thatanew release has been deployed to CarsDB. Here’s what I have come up with.
If you’re gonna call yourselfatechnology company, I believe it’s only right to grow some balls and act like one. But that’s just me.
Ten Rules for Good Code
Front-end developer ရှာနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ IT manager တွေ အနေနဲ့ မေးသင့်မေးထိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ Front-end developer အနေနဲ့ အလုပ်ရှာနေတဲ့ developer တွေ၊ front-end developer တစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ developer တွေ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ topic, tools and techniques တွေကိုစုထားတဲ့ repository တစ်ခုရှိပါတယ်၊ Front-end-Developer-Interview-Questions တဲ့။ HTML5 Boilerplate လုပ်တဲ့ အဖွဲ့ကစထားတာပါ။
တော်တော်ပြည့်စုံတဲ့အပြင် ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ topic တွေ၊ သိသလိုတော့ရှိတဲ့ technique တွေကို industry ထဲမှာ ဘယ်လိုခေါ်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ၊ သိပြီးသား tools တွေ technique တွေကိုလည်း ပြန်ဖတ်ပြီး နွှေးနိုင်တဲ့အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် မြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ လိုအပ်တာရှိရင် issues လေးတွေဖွင့်ပေးဗျာ။ ကိုယ်တိုင်လည်း Pull Request တွေတင်နိုင်ပါတယ်။
Front-end-Developer-Interview-Questions In Burmese »
By Sunsan Cains
မင်းတို့ငါတို့သိသမျှလူတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံဟာ introvert တွေဖြစ်သတဲ့။ စကားပြောနေရတာထက် ပိုနားထောင်ချင်တယ်၊ အပျော်အရွှင်တွေ ပါတီတွေထက် စာအုပ်တစ်အုပ် ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ဆို ပိုအဆင်ပြေတယ်၊ တီထွင်ကြံဆမယ်၊ ဖန်တီးပြုလုပ်မယ်၊ သို့ပေမယ့် ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်ရတာ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် promote လုပ်ရတာမကြိုက်ချင်ကြဘူး။ အဲ့လို လူရိုးလူအေးတွေလို့ အများစုက အမှတ်ပြုပြီး အဖက်မလုပ်ချင်ကြပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ – Van Gogh ရဲ့ Sunflowers တို့၊ Personal Computer တို့ အစရှိတဲ့ – အလုပ်မျိုးစုံတွေဟာ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို အကျိုးများစွာပြုတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာကိုတော့ မေ့လို့မရဘူးလို့ဆိုသတဲ့ဗျာ။
စာရေးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း introvert တစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ research တွေအပြည့်အစုံနဲ့အပြင်၊ လူတန်းစေ့ အစုံတို့ရဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက် ဇာတ်လမ်းတွေကိုထည့်ပြီးရေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Rails framework ဟာ 1.day.from_now လိုမျိုး idiom တွေကို အများကြီးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် ပုံမှန် rails သုံးတော့မှ ruby ကို စပြီးရေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်လိုလူမျိုးတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့ရသလို၊ purist တွေက အပြောအဆိုတွေလည်းခံရပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဲ့ဒီ့ Idiom တွေကိုသုံးကာ ကုဒ်တွေကို အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်ဆန် ရေးနိုင်ပြီး၊ ဖတ်ရတာလည်း ပိုလွယ်တဲ့အတွက်ပါ။
Thoughbot မှမောင်မင်းကြီးသားများက ကျွန်တော်တို့လို အခုမှ rails စရေးသူများအတွက် သုံးလို့ရရက်မသုံးြဖစ်တဲ့ idiom တချို့ကို list ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး။
Myanmar Election APIs and Examples
I’ve had the oppurtunity to attendadesign sprint session for upcoming Myanmar Election related hackathon. It was announced that these guys from, ASEAN Foundation, have been working on providing an API to create election related apps.
It is almost ready with the following end-points available for you to consume with documentations pending.
The API will be definitely useful for the upcoming “မဲပေးစို့” (MaePaySoh) Hack Challenge planned for 5-6 September @Phandeeyar.
I’ve always beenabig fan of caching mechanisms used in rails ever since I read the rail’s guide about caching. I had found that the design patterns that has been used to accomplish it had been so profoundly beautiful that I had implemented the pattern in other non-rails projects too. My fascination for it was even more enhanced when I found the practice of 37signal and DHH’s Russian Doll Caching.
MyanmarCarsDB goes through intensive periods of cache optimizations based on those practices and readings that caching is the only part of MyanmarCarsDB that requires its own documentations.
Nevertheless, we’ve been running into some issues with cache, mainly because the CacheStore we’ve been using has been the primitive ActiveSupport::Cache::FileStore.
The rigorous approach to caching detailed here is gonna beabig help to solving the problem we’ve been facing.
Goodbye wordpress, I’ve moved on.
အင်တာနက်တွေ နှေးလာတာနဲ့အတူ၊ Update တွေကို ထွက်တိုင်းလိုက်တင်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်၊ တစ်ခါမှ မရေးတဲ့ Wordpress blog ကနေ၊ အနည်းငယ်ပိုရေးမယ့် jekyll based blog တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ တကယ်တော့ MyanmarCarsDB ဆိုဒ်ရဲ့ သတင်းစာမျက်နှာတွေအတွက်ကို Wordpress အစား အခြားတစ်ခုပြောင်းသုံးဖို့ စဉ်းစားရင်း ရှာဖွေရင်းနဲ့ ဒါကိုတွေ့ခဲ့တယ်ပဲဆိုပါတော့။
ဒီ post မှာ jekyll အကြောင်းနဲ့ wordpress ကနေ ဘယ်လိုရွှေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အဓိကရေးသွားမှာပါ။